imibuzo kwi-intanethi dating Isikhokelo - Intanethi Dating
imibuzo kwi-intanethi dating Isikhokelo – Intanethi Dating
Kwi-intanethi zephondo ka-intanethi dating anike multifunctional inkonzo ukuba zokufundisa uqhagamshelane kwaye unxibelelwano phakathi abantu, couples, kwaye amaqela nge-intanethi. Idla ingaba oluhleliweyo ukukhuthaza mutual ulwazi encounter phakathi kwabantu omnye kwi-befuna friendship, romanticcomment adventure, ngesondo budlelwane okanye umphefumlo mate. Ngo nokubhalisa, kufuneka ubeke eyakho personal inkangeleko, igqiba apho i-data share kunye namanye amalungu nokukhetha unikezelo indlela, kwaye rhoqo onikiweyo ukuba uzalise i-personality uvavanyo ukuze anike inkqubo kunye i-data uphawu ukuba yenza kuye ukuba propose kuwe uthotho profiles yabanye abantu ebhalisiweyo abo baya okunokwenzeka kube ithelekiswa neqabane lakho uphawu, yakho tastes kwaye yakho okulindelweyo. Oku kwenziwa ngokusebenzisa uthelekiso ye-personality uvavanyo ngokusekelwe physiological iindlela, rhoqo ngokomgaqo-ngoncedo psychologists kwaye ingcaphephe entsimini. Indlela uqhagamshelane kwaye kuba ixhuamne izinto ezininzi: xa ukhethe bazibona profiles – phakathi kwabo ezicetywayo yi-system, ngokunjalo phakathi kwabo bonke abo amalungu, kanjalo kwi isiseko ukhetho nkqubo imiselwe ngumsebenzisi, onjalo – chonga abantu kunye leyo unqwenela ezisebenza: ukuzothi ga, uyakwazi qalisa incoko nge incoko (kananjalo rhoqo kwi-ifowuni-incoko kwaye ividiyo-incoko), thelekisa usebenzisa inkonzo abucala messaging, vumela enye ukufikelela ulwazi oluninzi (umzekelo yakho iifoto) kwaye, ekugqibeleni, tshintsha i-encounter ukususela onesiphumo kwi-real, oko kukuthi, organizing a real idinga. I-zephondo anike inkonzo ke leyo ichaphazelekayo ukuqinisekisa ukuba njengokuba kude kangangoko kunokwenzeka) kuchaneka ye data na kwaye intervene kwimeko lokwenza ingxelo kakubi okanye misconduct. Uninzi lwe-intanethi dating zephondo ingaba imali esekelwe (apho kwi-ngokwayo ufumana i-kwinto of action), kodwa kuvumela ukuba sayina kwaye ukufikelela eminye imisebenzi engundoqo ukwimo free okanye kuxhamla simahla ka yonke imisebenzi kwaye iinketho kuba lokulinga. Abanye zephondo ingaba abazinikeleyo ukuba abasebenzisi kunye ethile inqwenelela: umzekelo, kukho imiceli-mtshato i-intanethi nee-arhente kuba abo unqwenela ukufumana umphefumlo mate, okanye kuhlangana kunye uqhagamshelane abanye abantu kunye zichaziwe injongo ukuseka ubudlelwane ezinzima kwaye lasting. Kule meko, uvavanyo lwe affinity pair iya kuba ngaphezulu oluneenkcukacha kwaye kwi-ubunzulu. Kwezinye iimeko, sifumanisa zephondo ngakumbi”spicy”, explicitly oriented kwiintlanganiso i-entertainment kwaye i-ngesondo adventure (kanjalo homosexual), okanye ngokulula kakhulu efanelekileyo zephondo ukwandisa zabo friendships kwaye ufikelelo loluntu networks, neforam ka-ngxoxo. Konke oku, nkqu kwi-Italy, kule minyaka aliqela eminyaka, kubalulekile wokuba a trend, kakhulu widespread kwaye ethandwa kakhulu. Kukho izigidi omnye abantu ezama a iqabane lakho: i-internet yenza yonke into lula. I-intanethi dating zephondo kunikela a elinolwazi inkonzo ubeke ngokwakho kwi indawo ngakumbi convenient, kwaye imisikeko ukuba ngokukhululekileyo khetha nini kwaye njani ufuna, zakho zilungile iqabane lakho, ngokusebenzisa inkxaso, ukuhlola, ukhetho, kwaye unxibelelwano ukuba ukwenza olu phando enkulu, ithuba-otyebileyo kwaye ngobuchule. Ngo ufaka ngenyameko inkangeleko yakho kwaye yakho uphendlo nkqubo uyakwazi ukufikelela ezininzi profiles abantu ukuba ungakwazi ukwenza yakho meko, ngendlela ezizimeleyo uhlobo, igqiba kuni ixesha hlobo. Ukufumana ilungelo umntu, kuya kuba lula enkosi iimvavanyo ka-affinity. Yonke le ajongise phandle ukuba abe absolutely ngakumbi kakuhle kunokuba eziqhelekileyo befuna wobulali kwi-yengingqi okanye ukusetyenziswa ngakumbi ngokubanzi personal ads. I-zephondo”- intanethi daiting”ingaba, ngokwe-avareji kwizifundo nge-i-ababukeli bomdlalo bangene ka-abasebenzisi ukubonelelwa enkulu amadoda nabafazi phakathi iminyaka kwaye eminyaka. Ukuba enrol kufuneka ube i-omdala, kodwa abakho abanye ubudala imida. Abantu banako kuba ezininzi ezahlukeneyo, kwaye ke uqhagamshelane kwisiza esiza kuba ngaphezulu suited kubo: abo abakhangela entsha abahlobo, ngubani i-adventure, esiyaziyo umphefumlo mate. Iziko leenkcukacha-manani ukubonisa ukuba iindidi ngabantu kakhulu diverse: kulutsha, abadala, iingcali, abasebenzi, amagcisa, njalo-njalo. Ewe. Amawaka abantu budlelwane ngokusebenzisa i-intanethi indlela, baya get abaninzi iziganeko, kwaye abanye safika ngokunjalo kwaye get watshata. Usebenzisa i-internet ungafumana ezininzi ubungqina malunga. I-intanethi dating zephondo anike numerous iinkonzo, uphando kwaye uqhagamshelane kunye numerous abantu ukuba unga khetha kuba ubudala, yesitalato iimpawu, personality, tastes, loluntu isimo, imbonakalo (photography), bekhamera indawo, njalo njalo. Naye kuthatha indawo kwi-i-okungaziwayo ifomu, kwaye ivumela abantu lokugqiba njani, xa kwaye esabelana ukuba babelane olunye ulwazi, kwaye iinkcukacha. Iinkonzo ziquka ukuvavanywa affinity, iindlela-ukhetho, ulwazi malunga ngubani kwi-intanethi, incoko, i-imeyili, ifowuni-incoko kwaye ividiyo-incoko kunye ezininzi abasebenzisi ngexesha elinye, kwaye inkonzo ka-moderation nenkxaso apho azise criticism, izikhalazo okanye kakubi. Usebenzisa oko ngenjongo yokwazisa kwaye okulungileyo evakalayo ngu inkqubo enako zikhuseleke ngakumbi kunokuba abanye: kukho moderator, njengokuba kude kangangoko kunokwenzeka, isazisi ingaba ziqinisekisiwe, iindleko iqinisekisa ubuncinane ukhetho departure, ikhona a umthengi inkonzo apho ingxelo naziphi na iingxaki okanye kakubi. I-zephondo ingaba rhoqo lizele a inani iincam kwaye iziphakamiso ukwenza ulawulo ekhuselekileyo, ukuziphatha kwincoko kwaye ubuso ngobuso ntlanganiso. I isazisi ziyabandakanywa yangasese kwaye kusenokuba usharedi, kuxhonyekekwe misela ngumsebenzisi, kuphela phakathi ebhalisiweyo amalungu.
Uninzi kwi-intanethi dating zephondo vumela free ubulungu, akunakho faka inkangeleko (kunye okanye ngaphandle photography), ufikelelo personality uvavanyo imboniselo nezinye profiles ifomu inxalenye. Yokufikelela unxibelelwano kufuneka ubhalise emva koko, ungasebenzisa i private messaging, incoko-amagumbi, nayo yonke eminye imisebenzi. Abaninzi zephondo kuvumela ukuba ufikelele iimephu imisebenzi ukwimo free okanye ukufikelela ngokupheleleyo kuba lokulinga, idla iintsuku ezimbalwa. Uhlawula ngenyanga umrhumo, ngekota, nesiqingatha-iminyaka, iminyaka, njalo-njalo.
okanye uyakwazi ukuthenga amatyala (a zalisa)
Ngamanye amaxesha kukho zenkohliso zisebenze okanye isigunyaziso amathuba: umzekelo, ukuba kufuneka nabo ngaphakathi ethile ngokwe xesha, yandise umrhumo ixesha ukuya kwelinye, umzekelo, iinyanga simahla. Zephondo kukho abaninzi kwabo baye imveliso entsha okkt rhoqo ngenyanga. I-zephondo thina analyzed kwaye tested eziya eyona ukufumana kwabo ezidweliswe kwaye wahlaziya apha Kuphela abantu ebhalisiweyo kwi-site unako bonakalisa zabucala. Ukongeza, abaninzi zephondo kunikela olongeziweyo ngokhuseleko iinketho ngoko ke ukuba amalungu kuphela abo wagunyazisa ngumsebenzisi uya kukwazi ukufikelela inkcazelo engakumbi okanye, umzekelo, foto okanye webcam-incoko. Ngaba urhoxise i-akhawunti yakho ngokuthumela i-imeyili i-lwabalawuli le ndawo, okanye ngokusebenzisa inkqubo efanelekileyo xa kubonisiwe. Abaninzi zephondo ukuba anike kuba uhlaziyo oluzenzekelayo ye-umrhumo apho kumzekelo njalo zikhathalele ukwazisa inkonzo ukuba ufuna uvale i-akhawunti eshiya ngayo ukuphelisa kwaye hayi nokuhlaziya yakho ubulungu. Ingxelo yonyaka umntwana kakubi okanye inkcaza na enye uyakwazi uqhagamshelane site lwabalawuli, moderator okanye umthengi inkonzo. Abasebenzi baya intervene ukuya kwi-nqumamisa yobhaliso ye umntu
← Imbono Ntlanganiso, umtshato-Arhente kuba Icacile milancity in italy, brestcity in italy, Cuneo, Asti, Modena, turincity in italy, Bergamo
Ividiyo Unxibelelwano. Izibhengezo, papasha kwaye unikezelo ka-iziphetshana kwi-Imola →